तपाईँ खेल्दै गरेको होली कति सुरक्षीत छ ? – Nepali Health
तपाईँ खेल्दै गरेको होली कति सुरक्षीत छ ?
२०७५ चैत ६ गते ८:०२ मा प्रकाशित
वसन्त ऋतुको आगमन र शिशिर ऋतुको विदाई हुने बेला पर्ने पूर्णिमालाई फागु पूर्णिमा पनि भनिन्छ । यस पूर्णिमामाबषन्त ऋतुको स्वागतसंगै अत्यन्त हर्सोल्लास साथ रङहरु छ्यापाछ्याप गर्दै होली खेलिन्छ ।
के तराई, के पहाड, के हिमाल यसले हरेक समुदायलाई छोएको छ । यो चाड कुनै सम्प्रदायको नभई समस्त नेपालीहरुको चाड हो ।यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई एक ठाँउमा उभ्याउने मियोको काम गरेको छ ।
होली खेल्ले चलन :
होली को पौराणिक इतिहास कोट्याउदा, सबैले सानै देखि सुन्दै आएको कुरा, बिष्णु भगवानका परमभक्त प्रल्हाद थिए जो त्रेता युगका शक्तिशाली हिरण्यकश्यपुका छोरा थिए ।
प्रल्हादको बिष्णुप्रतिको भक्ति देखेर बाबु हिरण्य कश्यपुलाई निक्कै रिस उठ्थ्यो किनकी उनी आफुलाईनै भगवान ठान्थे र सबैले आफुलाई पुजा गरुन भन्ने चाहन्थे । प्रल्हादको त्यो लगावलाई तोड्न उनलाई मार्ने योजना गरि फुपु होलिकालार्ई जिम्मा दिइयोर होलिकालाई बरदान स्वरुप अग्निले जलाउन नसक्ने एउटा च्यादर प्राप्त थियो जुन ओढे पछि अग्निले छुन सक्दैनथ्यो ।
होलिकाले सो च्यादर ओढी प्रह्लाद्लाई काखमा राखी अग्नि माथि बस्छिन, अचम्मको कुरा होलिका अग्निले राख भइन तर प्रह्लादलाई केहि भएन । यही खुशियालीमा होलीको खेल्ने चलन चलेको बताइन्छ ।
होलीका रङ र हाम्रो स्वास्थ्य
होली विभिन्न खालका रङले छ्यापाछ्याप गरेर खेलिन्छ । त्यसमा पनि रातो निलो अनि पहेलोको आफ्नै महत्व छ । रातोले सामर्थ्य, विजय तथा सौभाग्य जनाउँछ, निलोले धैर्यता र मानवतालाई जनाउँछ भने पहेलो ले खुशी, सामर्थ्य तथा सकारात्मकतालाई बुझाउँछ । यही सकारात्मक सोचाइसंगै हर्सोल्लासले होली मनाउनु पर्छ आपसी भाइचारासंगै बर्षै भरिको आपसी तिक्ततालाई मेटाउने अवसर हो होली एक अर्कालाई रंग लगाएरर यसले समाजका हरेक तह र तप्कालाई नजिक ल्याउँछ र एकजुट हुन प्रेरणा दिन्छ ।
त्यसो त अचेल होलीसंगै केहि बिकृति पनि नभित्रिएका होइनन् । जथाभावी पानी त्यसमा पनि फोहोर पानीका लोला हान्ने, बाटो हिड्ने मान्छेलाई मानसिक त्रास दिने काम हुने गरेका छन् । यी सामाजिक समस्यालाई बेलैमा अन्त्य गरिनु पर्छ ।
कतिपयले यो चाडमा मिष्ठान्न भोजनमा भाङ्ग राखेर खाने चलन छ । त्यस्तै गाँजा तथा अल्कोहलको प्रयोग गरिएको पनि देखिन्छ जुन विकृति हो । किनकी यसले शरीरमा नराम्रो असर गर्छ । पहिले फुलका पात रङले होली खेलिन्थ्यो जुन अर्गानिक हुन्थे । अहिले उद्योगले नै विभिन्न खालका रङहरु बनाइदियो र रङमा पाइने केमिकलले शरीरमा नराम्रो असर पार्ने भो ।
केमिकल मिसिएका रङका असर बारे केही कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ :
जस्तै रातो रंगमा धेरैजसो मक्युरी सल्फेट भन्ने केमिकल हुन्छ । निलोमा प्रशियन ब्लु, बैजनीमा क्रोमियम ब्रमाईड, हरियो रङमा कपर सल्फेट बढी हुन्छ । कालोमा लिड अक्साइड जस्ता तत्वहरु । यी केमिकलहरुको अति प्रयोग हाम्रो स्वास्थ्यका लागि घातक बन्न पुग्छ ।
के हुन्छ यस्ता केमिकलका असर ?
छालामा पर्ने असरहरुः एलर्जी भएर चिलाउने, डाबर आउने, सुन्निने
आँखामा पर्ने असरहरु : एलर्जी भै चिलाउने, नानीमा चोटपटक लाग्ने, अन्धो नै बनाउन सक्ने
कपालमा पर्ने असरहरुः एलर्जी भै चिलाउने, कपालको जरामा समेत असर पारी रौँहरुम झर्ने, घाँउ खटिराहरु आउन सक्ने ।
सीडीसीले यस्तो भन्छ :
रोगहरुको बारेमा जानकारी दिने विश्वसनीय संस्था सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)ले निम्न केमिकलले यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्याहरु निम्त्याउन सक्ने बताएको छ । जस्तै :
लिड : होलिमा खेलिने रङमा लिड नामक रसायन पनि प्रयोग गरिन्छ । सीडीसीका अनुसार लिडयुक्त बस्तुको प्रयोगले स्नायुमा असर पार्न सक्छ । बालबालिकामा त राम्रोसंग वृद्धि विकास हुन दिंदैन । त्यस्तै श्रवणशक्ति कमजोर बनाउँछ साथै नयाँ कुरा सिक्ने क्षमतामा अबरोध पुर्याउछ । त्यस्तै रगतको मात्रा घटाउँछर मिर्गौलाको काममा बाधा पुर्याउने, पाचन प्रणालीमा गडबडी उत्पन्न गराउने जस्ता समस्या ल्याउछ ।
मर्करी : रङहरुमा प्रयोग हुने अर्को रसायन मर्करी हो ।मर्करीको असर हातहरु आफै थरर्र काम्नु, गिंजा सुन्निनु, धेरै मात्रामा र्याल निस्किनु, मिर्गौलाको काममा बाधा पुर्याउनु साथै मानसिक समस्या जस्तैस् निन्द्रा नलाग्नु, एकदमै उत्तेजित हुनु वा नबोलिकन बस्नु, यसको बाफले निमोनिया बनाउनु हुन्छ ।
कपर : रङहरुमा प्रयोग हुने अर्को रसायन कपर हो । यसको अतिप्रयोगले पेट दुख्ने, वान्ता तथा पातलो दिसा हुने, मुटु, कलेजो र मृगौलाको काममा बाधा गर्ने साथै मस्तिष्कमा असर पार्न सक्छ । कहिलेकाही त मृत्यु हुन सक्छ ।
आलुमिनियम : रङहमा प्रयोग हुने अर्को रसायन आल्मुनिय हो । हड्डी खिइनु, रगत बन्ने प्रक्रियामा बाधा पुर्याउनु, मृगौलाको काममा अवरोध गर्नु , मस्तिष्कमा असर पारी चेत अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु, मृगी तथा मृत्यु समेत हुनु
क्रोमियम : पाचन प्रणालीबाट यसको कमै असर परे पनि स्वास प्रणालीमा चाहि यसले क्यान्सर नै गराउँन सक्छ । त्यसैले होली खेल्दा स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
उसो भए होली खेल्न छोड्ने त ?
त्यसो पनि होइन तर होली खेल्दा सावधानी चाहि अपनाउनै पर्छ, त्यो यसरी :
सकेसम्म भद्र तरिकाले होली खेलौँ
जबरजस्ती अरुलाई रङ नलगाओं
रङ किन्दा खुल्ला भन्दा ब्रान्डेड रङ किनौं
रङ किन्दा त्यसमा केही केमिकल मिसाएको छ छैन यकिन गरौँ
अर्गानिक तथा इको फ्रेन्डली रङलाई प्रोत्साहन गरौँ
रङ खेल्दा संम्वेदनशील अंग जस्तै आँखा, नाक मुख कानमा पर्ने गरि प्रयोग नगरौं
खानेकुरामा भाङ्ग राखेर नखाओं अनि नखुवाओं पनि
डा. प्रमोद यादव बने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशक
जन्मदिनको अवसरमा प्रदेश सांसदद्धारा अंगदानको घोषणा